ကမ္ဘာ့ဆရာဆု အတွက် အဆိုပြု ခံရသူ ဟာနန် အဘ် ဟရော့ဘ် | Danya Wadi
»သတင်းများ»ကမ္ဘာ့ဆရာဆု အတွက် အဆိုပြု ခံရသူ ဟာနန် အဘ် ဟရော့ဘ်
ကမ္ဘာ့ဆရာဆု အတွက် အဆိုပြု ခံရသူ ဟာနန် အဘ် ဟရော့ဘ်
ကမ္ဘာ့ဆရာဆုအတွက်အဆိုပြုခံရသူ ၈၀၀၀ ထဲမှ ဒေါ်လာ တသန်းချီးမြင့် ခံရသော ၄င်းဆုကို ရရှိခဲ့သူ ဟာနန် အဘ်ဟရော့ဘ် ရာ မာလါမြို့ အပြင်ဘက် အလ်ဘီရာရှိ ဆာမီဟာကျောင်းသို့ပြန်ရောက်လါစဉ် သူမရဲ့နှစ်တန်း တပည့်များ ကကြိုဆိုခဲ့ကြ တာပါ။ ပါလက် စတိုင်းသူ ဆရာမဟနန်ဟာ အကြမ်းမဖက်ပဲငြ်ိမ်းချမ်းမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသော Play and Learn စာသင်နည်းဖြင့် သင်ကြားပေးခဲ့သူ အဖြစ် ထင်ရှား သည်။
On March 13, 2016, Hanan Al Hroub was awarded the second annual $1 million (Dh3.67m) Varkey Foundation Global Teacher Prize in Dubai, from among 8,000 nominees.
She returned to Samiha Khalil school in Al Bireh, just outside Ramallah, Palestine, on Sunday to cheers from her Grade2students.
Ms Al Hroub usesateaching technique she developed, called “Play and Learn”, which promotes peace and non-violence.
← အ​မေရိကန်​ အကျဉ်း​ထောင် ​တွင်​ ရဲ​မေ ၂ ​ယောက်​ က အကျဉ်းသား တစ်​​ယောက် ကို​ မုဒိန်းကျင့်​ မှုဖြင့်​ ရဲ​မေ ကို တရားစွဲ
၀မ်းမြောက်ဖွယ် သတင်းကောင်း ၊လေဖြတ်သူများကို နာရီပိုင်း အတွင်း အမြန် ကုသနိုင်ပြီ →